Global Voices teny Malagasy » Taorian’ny Fahafatesan’ilay Pelaka Mpanakanto Malaza, Mitaky Ny Fitovian-jo Amin’ny Mariazy Ny Vondrona LGBT ao Taiwan · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Oktobra 2016 16:05 GMT 1	 · Mpanoratra I-fan Lin Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Frantsa, Taiwan (ROC), Lalàna, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zon'ny Nanova na Mpitia Mitovy Fananahana (LGBT), Zon'olombelona
Afisy fampiratiana irery an'i Jacques Camille Picoux tamin'ny 2012.
Niteraka antso ho an'ny Antenimiera Taiwaney, Yuan, mba handany ny lalàna mbola miandry momba ny fitovian-jo amin'ny fanambadiana ny fahafatesan'ilay pelaka Frantsay mpampianatra izay voalaza fa tsy mety sitrana tanteraka tamin'ny fahalasanan'ny sakaizany matin'ny homamiadana tamin'ny taon-dasa.
Nifindra tao Taiwan tamin'ny taona 1979 i Jacques Camille Picoux , teraka tamin'ny 1948. Tamin'ny 17 Oktobra 2016, herintaona taorian'ny nahafatesan'ny sakaizany, hita faty tao ivelan'ny tranony tao Taipei izy. Namoy ny ainy izy rehefa nianjera avy eny amin'ny farany ambony rihan'ny tranobe misy rihana 10, araka ny filazan'ny polisy ao Taipei . Tsy misy ny fiahiahiana vono olona sy lalao ratsy, hoy ny polisy, satria tsy nahitana famantarana ady na fifandirana tao amin'ny efitranony na koa tao amin'ny tafon-trano.
Mpanakanto fanta-daza ao Taiwan i Jacques. Rehefa nisotro ronono taorian'ny fampianarana teny Frantsay tamin'ny taona 2005, nanohy ny zavakanto izy ary nanatontosa fampirantiana irery  tamin'ny 2012. Nandray anjara lehibe tamin'ny sarimihetsika nahazo loka, antsoina hoe “The Assassin (Ny Mpamono olona) ” (2015) ihany koa izy.
Nihevitra ireo mpianany sy ny namany fa namoy ny ainy noho ny alahelo taorian'ny fahafatesan'ny sakaizany tamin'ny 2015 izy; nahatonga azy ho fadiranovana (mijaly mandra-maty) ny tsy fankasitrahana ny fisakaizan'izy ireo ho ara-dalàna.
Yen-Jong Lee, mpianatr'i Jacques taloha nandefa  ny sarin'i Jacques sy ny sakaizany ary nanoratra ny tantaran'izy ireo tao amin'ny Facebook-ny tamin'ny Oktobra 2015, taorian'ny nahafatesan'ny sakaizan'i Jacques.
Tantara tena marina momba ireo lehilahy roa ity
Mpifankatia nankafy ny fiainana, ary efa niaraka ela be nandritra ny 35 taona izy ireo. Nampanantena hifampizara fiainana, saingy namoy ny ainy noho ny aretina ny iray zandriny… Andeha antsoika hoe C izy eto — niditra hopitaly i C noho ny fiverimberenan'ny homamiadana, ary niharatsy haingana ny toe-pahasalamany… nanana faniriana iray izy raha mbola teny amin'ny hopitaly: Hamela y sakaizany, J, afa-monina ao amin'ny trano nipetrahan'izy ireo ary hamela vola ampy ho an'i J mba tsy ho ahiahy be loatra amin'ny tohin'ny fiainany. Faniriana tsotra fotsiny izany. Na izany aza, tsy nivady izy ireo, ary tsy arovan'ny lalàna ny fiarahan'izy ireo. Tena sarotra tanterahana eo amin'ny tena fiainana ny hany mba faniriany … Tsy nahafantatra ny nahazo an'i C ireo namana sy mpianatr'i J raha tsy taty aoriana, rehefa nankany amin'ny hopitaly izy ireo, nahita fa nanomboka namindra ny fanananan'i C tany amin'ny fianakaviany ny fianakavian'i C… Na dia niara-niaina nandritra ny 35 taona aza i C sy J, tsy afaka nanao na inona na inona momba izany i J satria tsy nivady ara-dalàna izy ireo.
Andro maromaro taty aoriana, niharatsy ny toe-pahasalaman'i C ary tsy nahatsiaro tena izy … Fantatr'i J fa fanirian'i C ny hijanonan'ny fanaintainana haingana araka izay azo atao. Hoy izy tamin'ny dokotera ‘,haingana araka izay azo atao.’ Na izany aza, nihaino fotsiny ny hevitry ny fianakavian'i C ny dokotera, ary izy ireo ihany no afaka manapa-kevitra [momba ny fameloman'aina]. Satria tsy nivady i J sy C, vahiny tsy misy ifandraisany izy ireo, raha ny lalàna no jerena.
Nodimandry i C. Tamin'izany andro izany, Nijanona tany an-trano i J. Tsy nety nihinan-kanina izy fa nisotro vodka foana. Natory, nifoha ary nitomany.
Jacques Picoux sy ny zava-kantony.
Nahatonga ny Taiwaney hanosika ny fandaniana ny Lalànan'ny Fitovian-jo amin'ny Fanambadiana mbola miandry ao amin'ny mpanao lalàna Yuan ny fahafatesan'i Jacques.
Natolotra tao amin'ny Antenimiera Yuan tamin'ny 2012 ny volavolan-dalàna ary nodinihana voalohany tamin'ny 2013. Na izany aza, taorian'ny hetsika goavana manohitra ny fanambadian'ny olona mitovy taovam-pananahana tamin'ny 2014, nahantona ny volavolan-dalàna. Satria mpanohana mafy ny zon'ny LGBT ny filoha ankehitriny ao Taiwan, Tsai Ing-Wen, diso fanantenana ny LGBT fa nosakanan’ ny fitondran'i Tsai ny lalàna.
Sokajiana ho iray amin'ireo firenena malalaka indrindra any Azia i Taiwan noho ny tontolony naman'ny LGBT. Kanefa milaza zavatra betsaka amin'ny tsy fahampian'ny “finamanana” ny fahafatesan'i Jacques.
Raha vao nandre ny vaovao momba ny fahafatesan'i Jacques, notsikerain’ i Hsin-Yi Chu, izay pelaka ihany koa ny mpivaro-bava karamaina hiaro ny zon'ny LGBT ary nandrisika izy ny hanaovana hetsika fanohanana mivaingana kokoa:
Namoy ny ainy androany ny Profesora Picoux.
Nahoana ny sakaizan'ny olona iray niaraka nandritra ny 35 taona no tsy afaka miaina toy ny vady ara-dalàna ary miara-miatrika aretina sy fahafatesana tahaka ny vady ara-dalàna?
Mihatsaravelatsihy ity tontolo ity! Ho an'ireo milaza fa tena naman'ny vondrona LGBT i Taiwan, mpivaro-bava fotsiny ireo teny ireo. Milaza izy ireo fa manohana ny vondrona LGBT, saingy mandà tsy hanome zo ho an'ny vondrona LGBT. Fihatsarambelatsihy tanteraka ny [finamanana]!
Aza manarama mpivaro-bava hanohana ny “fitovian-jo ho an'ny vondrom-piarahamonina LGBT” fotsiny. Tsy misy dikany ny teny! Raha mbola tsy ampidirina ao anaty lalàna ny fanambadian'ny olona roa mitovy taovam-pananahana, midika tsinontsinona izany!
Manomana ezaka faramparany hanafainganana ny lalàna amin'ny alalan'ny diabem-pireharehana hotontosaina ao Taiwan amin'ny 29 Oktobra ihany koa ny vondrom-piarahamonina LGBT. Ny lohahevitra amin'ny diabe amin'ity taona ity dia “Vakio ny sarontavan'ny hatsaram-panahy mihatsaravelatsihy “:
Manarama mpivaro-bava marobe ho an'ny [vondrom-piarahamonina LGBT] ny fiarahamonintsika. Miresaka amin'ny fampiasana teny tsara fanahy sy tia namana izy ireo ary milaza fa “ho an'ny mahasoa anao manokana” ity na ity.
fanavakavahana voarindra am-pitaka no tena fototr'ireo teny ireo. Tsy mahita ny tena zavatra iainana izy ireo ary tsy miresaka ny toe-java-tsarotra atrehan'ny olona isan-karazany ao amin'ny vondrona LGBT. Voarindra ara-potoana saingy manjaka ny fanavakavahana. Ao anatin'izany fanavakavahana izany, tsy malalaka hiseho amin'ny maha LGBT azy ry zareo olona LGBT ary tsy maintsy mitolona sy miady hatrany amin'ny [fitsarana an-tendrony takonana amin'ny teny tsara fanahy]. Tena mahakivy sy maharary izany.
Manasongadina ohatra sasany mikasika ny teny “tsara fanahy” voalaza etsy ambony ireo mpikarakara ny diabe
Tsy manohitra ny pelaka sy ny vehivavy mpifankatia aho, raha mbola tsy anisan'izy ireo ny zanako
Mety amiko ny vehivavy mpifankatia, saingy tsy mankatoa ny pelaka aho
Mino aho fa tena be herim-po ireo olona pelaka sy lesbiana, saingy tsy tokony ampahafantarintsika ny ankizy ny momba azy ireo satria tsy mahafantatra na inona na inona ny ankizy
Raha voan'ny SIDA ianao, tsy tokony hivoaka any ivelany, raha tsy izany hampidi-doza ho an'ny olona hafa
Tsara ny mijanona ianao ihany, saingy tsara kokoa ho an'ny tovovavy ny mandala ny mahazatra.
Mihevitra ny sasany fa ny fandaniana ny lalànan'ny fitovian-jo amin'ny fanambadiana ao Taiwan dia resaka fotoana fotsiny. Saingy nampiandrasana nandritra ny telo taona mahery hatramin'izao ny volavolan-dalàna, ary manahy ny sasany fa mety havadiky ny governemanta ho lalàna mametraka ny fiarahan'olon-droa mitovy taovam-pananahana monina an-tokatrano izany – fa tsy fanambadiana – mba hahazoana fanohanana bebe kokoa amin'ny vahoaka. Tsy mahandry manoloana ny fahatarana ny fiarahamonina LGBT sy ny mpanohana azy ireo.
Ny anton'ny famonoan-tena voalohany dia fahakiviana tsy voatsabo. Azo sitranina ny fahakiviana ary azo sorohina ny famonoan-tena. Afaka mahazo fanampiana fanohanana manokana an-telefonina ianao sy ireo manana olana ara-pihetseham-po. Tsidiho ny Befrienders.org  raha te hahazo fanampiana amin'ny antso an-telefonina mikasika ny fisorohana ny famonoan-tena ao amin'ny firenenao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/10/29/90822/
 Jacques Camille Picoux: http://www.jacquespicoux.com/biographie.htm
 araka ny filazan'ny polisy ao Taipei: http://focustaiwan.tw/news/asoc/201610170006.aspx
 fampirantiana irery: http://worldofnancylublog.blogspot.tw/2012/10/magic-stardust-from-glory-days-of.html
 The Assassin (Ny Mpamono olona): http://www.imdb.com/title/tt3508840/?ref_=nm_ov_bio_lk1
 Vakio ny sarontavan'ny hatsaram-panahy mihatsaravelatsihy: http://www.twpride.org/
 resaka fotoana : http://www.taipeitimes.com/News/feat/archives/2015/11/29/2003633577